အရက်နာကျတာကို မျက်လှည့်ပြလိုက်သလိုသက်သာပျောက်ကင်းသွားစေမယ့်နည်းလမ်းများ – Trend.com.mm
Posted on April 2, 2018 by Noel
TGIF တို့၊လကုန်ရက်တို့မှာ ကဲပြီးရင် နောက်တစ်နေ့ ထပ်ပြီးဖလန်းဖလန်းထဖို့ဆိုတာ မလွယ်တော့ပါဘူး။ကဲထားသမျှ ပြန်ပြီးဒဏ်ခံရတဲ့မနက်ခင်းတွေကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ ဒီနည်းလမ်းတွေသိထားဖို့ လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။နည်းလမ်းတွေကတော့…
ညကသောက်တာများသွားတယ်ဟုတ်! အယ်လ်ကိုဟောက ခန္ဓာကိုယ်ရေဓာတ် ကိုခြောက်သွေ့စေလို့ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးပြီးပင်ပန်းသလိုဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့အရက်မသောက်ခင်၊အရက်သောက်နေတုန်းနဲ့အရက်သောက်ပြီးချိန်တွေမှာ ရေများများသောက်ပေးဖို့ပါပဲ။အရက်များများသောက်လေ ရေများများ ပိုသောက်ပေးရလေပါပဲ။နောက်တစ်နေ့မိုးလင်းနိုးလာရင်လည်း နာရီဝက်ခြား တစ်ခါလောက်ရေသောက်ပေးရင် သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
အုန်းရေက ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်စေသလို အရက်နာကျတဲ့အခါမှာလည်း ချန်ထားလို့မရပါဘူး။အုန်းရေမှာ ငှက်ပျောသီးထက်ပိုတက်ဆီယမ်များပြီး ခန္ဓာကိုယ်အဓိကလိုအပ်တဲ့ပိုတက်ဆီယမ်၊ဆိုဒီယမ်၊ကလိုရင်း၊ကယ်လ်စီယမ်၊မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်တွေပါဝင်လို့ အရက်နာကျတဲ့အခါ အုန်းရေသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။အုန်းရေထဲကို သံပုရာသီးအနည်းငယ်ညှစ်ထည့်ပြီးသောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အုန်းရေပြီးရင် ပိုတက်ဆီယမ်များတာက ငှက်ပျောသီးပါပဲ။အုန်းရေက အလွယ်တကူမရှိဘူး ဆိုလည်းငှက်ပျောသီးကို မနက်မိုးလင်းရင်စားဖို့မမေ့ပါနဲ့။အရက်နာကျတဲ့အခါ ခေါင်းတွေကိုက်ပြီးတစ်ကိုယ်လုံးမလှုပ်ချင်မကိုင်ချင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ပြန်ဖြည့်ဖို့ငှက်ပျောသီးစားပေးပါ။ဖြစ်နိုင်ရင်ငှက်ပျောသီးယူသွားပြီး သောက်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်သရေစာအဖြစ် စားပေးရင်ပိုကောင်းပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးက သင့်ရဲ့ အရက်နာကျမှုအတွက် ဆေးတစ်လက်ပါပဲ။အယ်လ်ကိုဟောအတွက် ကောင်းမွန်စေတဲ့အနီရောင်အသီးက ခရမ်းချဉ်သီးပါပဲ။ခရမ်းချဉ်သီးမှာ အယ်လ်ကိုဟောကြောင့်လျော့ပါးသွားတဲ့ဓာတ်တွေကို ပြန်ပြီးဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းတွေရှိပါတယ်။အစာအိမ်အတွင်းက ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုလည်းကောင်း
မွန်စေလို့ မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါ ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည်ကိုသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
အရက်နာကျတာတွေအတွက် ပျားရည်ကလည်းအကောင်းဆုံးဆေးတစ်လက်ပါပဲ။ပျားရည်က အရက်သောက်ပြီးလို့ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အားအင်တွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး ပိုတက်ဆီယမ်လည်းပါဝင်တဲ့အတွက် အရက်နာကျတာကို အမြန်ဆုံးသက်သာစေပါ တယ်။ပျားရည်အနည်းငယ်ကိုပေါင်မုန့်ထဲမှာထည့်ပြီးဖြစ်စေ စားပေးနိုင်ပါတယ်။
အရက်နာကျတာက အိပ်ရေးပျက်တာကြောင့်မဟုတ်တာတော့သေချာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညက သောက်ပြီးရင် မနက်ကျ ကောင်းကောင်းအိပ်ရမယ့်အစားအိပ်ရေးပါထပ်ပျက်ရင် ပိုပြီးဆိုးပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မနက်ခင်းတစ်မနက်လောက်အေးဆေးအိပ်လိုက်ပါ။ခန္ဓာကိုယ်က သူ့အလုပ်ကိုယ်သူကောင်းကောင်းလုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
တစ်ညလုံးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကဲပြီးလို့ နောက်တစ်နေ့ကျအရက်နာကျနေမယ်ဆိုရင် မနက်ခင်းလုံးအိပ်ရေးဝအောင်အိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်နေ့လည်စာကအရေးကြီးပါတယ်။နေ့လည်စာကို ဂေါ်ဖီထုပ်၊ကိုက်လန်၊ပန်းဂေါ်ဖီစတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ပါအောင်စားပါ။ဂေါ်ဖီပန်းတွေက အသည်းကိုကောင်းစေလို့အရက်နာကျတဲ့သူအတွက်အကောင်းဆုံးနေ့လည်စာပါပဲ။ဂေါ်ဖီထုပ်များများစားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။
TGIF တို့၊လကုနျရကျတို့မှာ ကဲပွီးရငျ နောကျတဈနေ့ ထပျပွီးဖလနျးဖလနျးထဖို့ဆိုတာ မလှယျတော့ပါဘူး။ကဲထားသမြှ ပွနျပွီးဒဏျခံရတဲ့မနကျခငျးတှကေိုအဆငျပွခြေောမှစှေ့ာ ဖွတျသနျးနိုငျဖို့ ဒီနညျးလမျးတှသေိထားဖို့ လိုကိုလိုအပျပါတယျ။နညျးလမျးတှကေတော့…
ညကသောကျတာမြားသှားတယျဟုတျ! အယျလျကိုဟောက ခန်ဓာကိုယျရဓောတျ ကိုခွောကျသှစေ့လေို့ ရဓောတျဆုံးရှုံးပွီးပငျပနျးသလိုဖွဈစပေါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့
အကောငျးဆုံးနညျးလမျးကတော့အရကျမသောကျခငျ၊အရကျသောကျနတေုနျးနဲ့အရကျသောကျပွီးခြိနျတှမှော ရမြေားမြားသောကျပေးဖို့ပါပဲ။အရကျမြားမြားသောကျလေ ရမြေားမြား ပိုသောကျပေးရလပေါပဲ။နောကျတဈနမေို့းလငျးနိုးလာရငျလညျး နာရီဝကျခွား တဈခါလောကျရသေောကျပေးရငျ သကျသာစပေါတယျ။
အုနျးရကေ ခန်ဓာကိုယျကနျြးမာရေးအတှကျကောငျးမှနျစသေလို အရကျနာကတြဲ့အခါမှာလညျး ခနျြထားလို့မရပါဘူး။အုနျးရမှော ငှကျပြောသီးထကျပိုတကျဆီယမျမြားပွီး ခန်ဓာကိုယျအဓိကလိုအပျတဲ့ပိုတကျဆီယမျ၊ဆိုဒီယမျ၊ကလိုရငျး၊ကယျလျစီယမျ၊မဂ်ဂနီဆီယမျဓာတျတှပေါဝငျလို့ အရကျနာကတြဲ့အခါ အုနျးရသေောကျပေးသငျ့ပါတယျ။အုနျးရထေဲကို သံပုရာသီးအနညျးငယျညှဈထညျ့ပွီးသောကျပေးနိုငျပါတယျ။
အုနျးရပွေီးရငျ ပိုတကျဆီယမျမြားတာက ငှကျပြောသီးပါပဲ။အုနျးရကေ အလှယျတကူမရှိဘူး ဆိုလညျးငှကျပြောသီးကို မနကျမိုးလငျးရငျစားဖို့မမပေ့ါနဲ့။အရကျနာကတြဲ့အခါ ခေါငျးတှကေိုကျပွီးတဈကိုယျလုံးမလှုပျခငျြမကိုငျခငျြဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့ပိုတကျဆီယမျဓာတျပွနျဖွညျ့ဖို့ငှကျပြောသီးစားပေးပါ။ဖွဈနိုငျရငျငှကျပြောသီးယူသှားပွီး သောကျနတေဲ့အခြိနျမှာတောငျသရစောအဖွဈ စားပေးရငျပိုကောငျးပါတယျ။
ခရမျးခဉျြသီးက သငျ့ရဲ့ အရကျနာကမြှုအတှကျ ဆေးတဈလကျပါပဲ။အယျလျကိုဟောအတှကျ ကောငျးမှနျစတေဲ့အနီရောငျအသီးက ခရမျးခဉျြသီးပါပဲ။ခရမျးခဉျြသီးမှာ အယျလျကိုဟောကွောငျ့လြော့ပါးသှားတဲ့ဓာတျတှကေို ပွနျပွီးဖွညျ့ပေးနိုငျတဲ့ အစှမျးတှရှေိပါတယျ။အစာအိမျအတှငျးက ဇီဝဖွဈစဉျကိုလညျးကောငျး
မှနျစလေို့ မနကျမိုးလငျးတဲ့အခါ ခရမျးခဉျြသီးဖြျောရညျကိုသောကျပေးသငျ့ပါတယျ။
အရကျနာကတြာတှအေတှကျ ပြားရညျကလညျးအကောငျးဆုံးဆေးတဈလကျပါပဲ။ပြားရညျက အရကျသောကျပွီးလို့ကုနျဆုံးသှားတဲ့အားအငျတှကေိုပွနျလညျဖွညျ့တငျးပေးပွီး ပိုတကျဆီယမျလညျးပါဝငျတဲ့အတှကျ အရကျနာကတြာကို အမွနျဆုံးသကျသာစပေါ တယျ။ပြားရညျအနညျးငယျကိုပေါငျမုနျ့ထဲမှာထညျ့ပွီးဖွဈစေ စားပေးနိုငျပါတယျ။
အရကျနာကတြာက အိပျရေးပကျြတာကွောငျ့မဟုတျတာတော့သခြောပါတယျ။ဒါပမေဲ့ညက သောကျပွီးရငျ မနကျကြ ကောငျးကောငျးအိပျရမယျ့အစားအိပျရေးပါထပျပကျြရငျ ပိုပွီးဆိုးပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ မနကျခငျးတဈမနကျလောကျအေးဆေးအိပျလိုကျပါ။ခန်ဓာကိုယျက သူ့အလုပျကိုယျသူကောငျးကောငျးလုပျသှားပါလိမျ့မယျ။
တဈညလုံးသူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူကဲပွီးလို့ နောကျတဈနကေ့အြရကျနာကနြမေယျဆိုရငျ မနကျခငျးလုံးအိပျရေးဝအောငျအိပျလိုကျပါ။ပွီးရငျနလေ့ညျစာကအရေးကွီးပါတယျ။နလေ့ညျစာကို ဂျေါဖီထုပျ၊ကိုကျလနျ၊ပနျးဂျေါဖီစတဲ့ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ ပါအောငျစားပါ။ဂျေါဖီပနျးတှကေ အသညျးကိုကောငျးစလေို့အရကျနာကတြဲ့သူအတှကျအကောငျးဆုံးနလေ့ညျစာပါပဲ။ဂျေါဖီထုပျမြားမြားစားပေးဖို့မမပေ့ါနဲ့။